अहिले म नबन्ने, मैले त अरुलाई नै बनाउने हो : प्रचण्ड – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०३:५५ English
० अध्यक्षज्यु, सहमतिका कुरा धेरै भए, कहिले र कसरी हुन्छ सहमति ?
– दलहरूबीचमा सहमतिको विकल्प छैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ– सहमति हुन्छ र निकास पनि निस्किन्छ ।
० दलहरू अडानमा टसका मस छैनन्, सहमति कसरी हुन्छ त ?
– सहमति सम्झौता गरेर, समझदारी बनाएर हुन्छ । हामीसँग समय धेरै छैन, यो महिनाको अन्तिमसम्ममा सहमति गरिसक्यौँ भने वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक ऐनकानुन बनाउन सम्भव छ । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो महिनाको अन्तिमसम्ममा सहमति हुन्छ ।
० सहमति हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यसको आधार के ?
– विगतमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलहरूले विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर सहमतिको सरकारमार्फत निर्वाचनमा जाने सहमति गर्नुपर्छ ।
० अहिलेसम्म सहमति भएको विषयचाहिँ के–के हुन् त ?
– पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । दोस्रो वैशाखभित्रै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेमा पनि सहमति छ । तेस्रो अहिलेको अवस्थामा पहिलाको संविधानसभाको निर्वाचनजस्तै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचनको क्षेत्र मानेर समानुपातिकमा सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि सहमतिजस्तै छ । अर्को निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यस्तै राजनीतिक सहमतिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र संशोधनको प्रक्रिया एकपटकलाई बाधा–अड्काउ फुकाउबाटै जानुपर्छ भन्नेमा पनि सहमति छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानेजस्ता विषय टुङ्गिसकेको छ । यति धेरै विषयमा सहमति हुनु आफैँमा ठूलो हो । अब बा“की रहेको विषय भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसले बनाउने भन्ने मात्रै हो ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले कि एमाओवादीले गर्ने ?
– यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादी मात्र छैन, अरू पनि छन् । मधेसी मोर्चा पनि छ, वैद्यजीहरू पनि हुनुहुन्छ, साना पार्टी पनि छन्, सबै पार्टीहरू यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने ठाउँमा छन् । सहमतिको क्यान्डिडेट सबै छन् । मैले धेरैपटक भनिसकेँ, बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति गर्दा सबैभन्दा उत्तम र सहज हुन्छ भन्ने आमनेपालीले बुझेको कुरा हो । त्यो व्यावहारिक, संवैधानिक, कानुनी र उपयुक्त पनि छ । यही सरकारमा काङ्ग्रेस र एमाले सहभागी भएर जाँदा सबैभन्दा सजिलो हुन्छ र निकास तुरुन्तै आउँछ ।
० काङ्ग्रेस र एमालेले त्यो मान्लान् र ?
– मेरो भनाइ मान्नुपर्छ भन्ने हो । बाबुराजीकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँहरू त्यसमा सहमत हुन सकिरहनुभएको छैन । त्यसैले अब कसरी कसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब बहस सुरु भएको छ । पहिला खेलाडी मैदानमा थिएनन् । अहिले काङ्ग्रेसले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर राम्रो काम गरेको छ । मैले यही कोठामा सुशीलजीलाई बधाई दिएको हुँ । तपार्इंहरूले उम्मेदवार सारेर रियल खेल सुरु गर्नुभयो भनेर । यसले अब निकासको वातावरण निर्माण गरेको छ ।
० खेलाडीहरू मैदानमा आए, अब बाबुराम भट्टराई कि सुशील कोइराला कसले गोल गर्ला ?
– पहिला मैदान खाली थियो । अब खेलाडी आएका छन् । गोल जसले पनि गर्न सक्छ । बाबुरामजीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । सुशीलजी पनि सहमतिका लागि तयार हुनुभयो भने गोल गर्न सक्नुहुन्छ । म चाहन्छु, बाबुराजीले गोल गर्नुस् र उहाँकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाआँै । तर, सहमति जसको नेतृत्वमा हुन्छ गोल उसैले गर्छ । म अहिले त्यो गोलको प्रतीक्षामा छु ।
० तपाईंको प्रधानमन्त्रीको उम्मदेवार को त ?
– पहिलो नम्बरमा बाबुराम भट्टराई नै हो । उहाँकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो । दोस्रो प्रमुख विपक्षी गठबन्धनको कारणले सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल पनि हो । मेरै पार्टीको नेतृत्वमा बन्दाखेरि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हो । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट बन्दा विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुर हो । त्यसैले यी नामभित्रबाटै सहमति खोज्नुपर्छ ।
० नारायणकाजी श्रेष्ठ कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?
– किन उहाँ बन्न नसक्ने ? उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको प्रबल दाबेदार हो ।
० महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदारलाई खुसी पार्न मात्रै उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको हो ?
– केही समय पहिला महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर मलाई सूचना आयो । त्यत्रो ठूलो चर्चा थियो । मैले भनेको छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाभित्रैबाट सहमतीय सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा बाबुरामजीको नेतृत्वमा सहमति नहुँदा विजय र महन्थजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदैन भन्ने के छ ? मैले कसैलाई खुसी पार्न भनेको होइन, मैले वास्तविकता भनेको हुँ । मैले निकासको विकल्प दिएको हुँ । यी व्यक्तिहरूमध्येबाट जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि मुलुकले निकास पाउनुपर्छ ।
० सूर्यबहादुर थापाको नाम पनि चर्चामा छ नि ?
– सूर्यबहादुर थापाको नाम मैले लिएको छैन । उहाँ हाम्रो गठबन्धनमा हुनुहुन्न । मैले गठबन्धनभित्रकै कुरा गरिरहेको छु । अबको सरकार पनि गठबन्धनभित्रबाटै बन्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मैले प्रमुख प्रतिपक्षीको नाताले सुशीलजीको नाम लिएको हुँ । संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा पहिला पनि मैले संविधान जारी भयो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको थियो । त्यो हुन सकेन, अर्कै स्थिति पैदा भयो । मैले सूर्यबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गरेको छैन ।
० तपाईंको गोजीमा धेरैजना प्रधानमन्त्रीको नाम छ रे नि ? बादललाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार्नुभयो रे ?
– बादलजीले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न नहुने कारण नै छैन । तपाईंले किन बादलजीको विरोध गर्ने ? हिजो झलनाथ खनाललाई हामीले समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई १२बुँदे समझदारी हुँदै हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार ग¥यौँ । ठूला नेताको रूपमा पनि स्वीकार ग¥यौँ । हामीले नेपाली काङ्गे्रसलाई पनि अहिले नाम ल्याउनुस् न प्रधानमन्त्रीको भन्यौँ, सुशीलजीलाई ल्याउनु पनि भयो । हामीबाट विभाजित भइसकेपछि पनि बादलजीमा सहमति हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने होइन । मेरो त उहाँ बच्चादेखिको साथी पनि हो ।
० तपार्ईं एमालेसँग एउटा कुरा, काङ्ग्रेससँग अर्कै कुरा, अरू जोसँग पनि अलगअलग कुरा गर्नुहुन्छ नि ?
– अरू हजार कुरा गर्छन् । मेरो त एउटै कुरा हो । झलनाथजीसँग गए नि, सुशीलजीसँग गए नि, अरू पार्टीकहाँ पनि त्यही हो । मेरो एउटै कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छिटोभन्दा छिटो हुनुप¥यो । म यो रेसमा छैन । निर्वाचनतिर मुलुकलाई लिएर जानुप¥यो ।
० के भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्य हुन्छ ?
– नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घीय संविधान बनाउने पूर्ण ग्यारेन्टीका साथ आए र विगतमा संविधानसभामा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि स्वीकार्न सकिन्छ । काङ्ग्रेसलाई अछुतो राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । म भन्छु– काङ्ग्रेस र एमाओवादी मिलौँ र मुलुकलाई निकास दिऔँ । त्यसका लागि काङ्ग्रेसले ठूलो छाती बनाएर, लचिलो भएर आउनुपर्छ । मैले धेरै विकल्प दिएको छु । सुशीलजीले पनि विकल्प ल्याउनुप¥यो नि । उहाँ प्रधानमन्त्री लिन चाहने, दिनचाहिँ नचाहने ? मैले त भनिसकेको छु, गृह, अर्थ मन्त्रालय लिनुस्, यही सरकारमा आउनुस् । तर, उहाँले चाहिँ यो कुरा नगर्ने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन उहाँले यो–यो कुरा गर्छु भनेर ठोस प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो नि । प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छेले धेरै विकल्प लिएर आउनुपर्छ । तर पनि सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन ।
० पुसको पहिलो हप्तासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ला त ?
– मैले बनाएर हुन्थ्यो भने त आजै बनाउँथेँ । काङ्ग्रेसको, एमालेको, मधेसी मोर्चाको र अरू साना पार्टीहरूको कुरा हेर्दा म के देख्छु भने हामीसँग समय एकदम कम छ । यो महिनाभरि सहमति हुने सम्भावना छ । अरू कुरा मिल्दै गएका छन् । सुशीलजीको उम्मेदवारी आएपछि टुङ्ग्याउन सजिलो भएको छ । छलफल गर्न सजिलो भएको छ । यसले सहमतिको वातावरण निर्माण गरेको छ ।
० मुलुकलाई संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार दिन नसकेकोमा आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ ?
– हो, मैले आत्मसमीक्षा गरिराखेको छु । मानिसले भनेका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । आरोप र जस पनि ममाथि नै आउँछ । इतिहासको एउटा जटिल सङ्क्रमणकालमा नेतृत्वमाथि हुनुपर्ने दबाब सबै मैले अनुभूत गरिरहेको छु । कति आरोप खेप्नुपर्दो रहेछ, कति समर्थन हुन्छ । कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने सबै मैले खेपेको छु । राष्ट्रिय सहमति नहुँदा, सरकार नबन्दा, मूल नेतृत्वमाथि कस्तो प्रहार, दबाब र विरोध हुन्छ भन्ने पनि मलाई अनुभूति छ । तर, मलाई विश्वास छ, नेपाली जनताले जतिसुकै उतारचढाव भए पनि म र मेरो पार्टीमाथि अहिले पनि विश्वास राखेका छन् । म जनताप्रति आभारी छु । मुलुकलाई निकास दिन म आफूले भ्याएसम्म कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ ।
० तपाईंचाहिँ प्रधानमन्त्री नबन्ने ?
– म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीको दौडमा छैन र अहिले रहने पनि छैन । मेरो काम भनेको अहिले सहमति निकाल्ने हो । म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर सहमति हुन सक्दैन । मेरो यतिबेलाको मिसन भनेको सहमतिका लागि अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो, आफू बन्ने होइन ।
० तर, काङ्ग्रेस र एमालेले तपाईंलाई नै प्रस्ताव गरे भने के गर्नुहुन्छ ?
– त्यस्तो हाइपोथेसिस कुरा नगरौँ, म अहिले काङ्ग्रेस र एमालेले भने पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा छैन । त्यस्तो प्रस्तावको कुरा नगरौँ । अहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि कसरी निकास आउँछ भन्नेमा सबैको चिन्ता हुनुपर्छ ।
२७ मंसिर २०६९, बुधबार ००:०६ मा प्रकाशित